30 O wee ruo ka Devid na ndị ikom ya nọ na-alọta Ziklag+ n’ụbọchị nke atọ, na ndị Amalek+ wakporo ebe ndịda nakwa Ziklag; ha wee buso Ziklag agha ma gbaa ya ọkụ, 2 dọrọkwa ndị inyom+ na ndị niile bi na ya n’agha, malite n’onye kasị nta ruo n’onye kasị ukwuu. Ha egbughị onye ọ bụla, kama ha kpụụrụ ha lawa. 3 Mgbe Devid na ndị ikom ya lọrutere obodo ahụ, lee, a gbawo ya ọkụ, a dọrọwokwa ndị nwunye ha na ụmụ ha ndị ikom ma ụmụ ha ndị inyom n’agha. 4 Devid na ndị ya na ha so wee malite ịkwa ákwá n’olu dara ụda,+ ruo mgbe ike ịkwa ákwá na-adịkwaghị ha. 5 A dọrọwokwa ndị nwunye Devid abụọ n’agha, bụ́ Ahịnoam+ nwaanyị Jezril na Abigel+ nwunye Nebal onye Kamel. 6 O wee wute Devid nke ukwuu,+ n’ihi na ndị ahụ sịrị ka a tụọ ya nkume;+ n’ihi na ọ na-ewute ha niile ná mkpụrụ obi,+ onye nke ọ bụla n’ihi ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom. Devid wee jiri Jehova bụ́ Chineke ya na-eme onwe ya ka ọ dị ike.+ 7 Devid wee sị Abayata+ onye nchụàjà, nwa Ahimelek: “Biko, wetara m efọd.”+ Abayata wee wetara Devid efọd ahụ. 8 Devid wee malite ịjụ Jehova ase,+ sị: “Ọ̀ bụ m chụwa ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga nke a? M̀ ga-achụkwu ha?” O wee zaa ya,+ sị: “Chụwa ha, n’ihi na ị ga-achụkwu ha, ị ga-anapụtakwa ha ihe niile.”+ 9 Ngwa ngwa, Devid gawara, ya na narị ndị ikom isii+ ya na ha so, ha wee ruo n’iyi ndagwurugwu Bisọ, ndị ikom bụ́ ndị a ga-ahapụ n’ebe ahụ wee kwụsị. 10 Devid wee chụrụ ha na-aga,+ ya na narị ndị ikom anọ, ma narị ndị ikom abụọ kwụsịrị n’ihi na ike gwụrụ ha nke ukwuu nke na ha apụghị ịgafe iyi ndagwurugwu Bisọ.+ 11 Ha wee hụ otu nwoke onye Ijipt+ n’ọhịa. Ha wee kpọgara ya Devid ma nye ya achịcha ka o rie, nyekwa ya mmiri ka ọ ṅụọ. 12 Ha nyekwara ya otu ibé mbadamba achịcha mkpụrụ fig na achịcha abụọ e ji mkpụrụ vaịn a mịrị amị mee.+ O wee rie, mmụọ ya+ wee lọghachi n’ime ya; n’ihi na o ribeghị nri ma ọ bụ ṅụọ mmiri kemgbe ụbọchị atọ, ehihie na abalị. 13 Devid wee sị ya: “Ònye nwe gị, oleekwa ebe i si?” O wee zaa, sị: “Abụ m onye Ijipt na-eje ozi, ohu nke nwoke Amalek, ma nna m ukwu hapụrụ m n’ihi na m dara ọrịa n’ụbọchị atọ gara aga.+ 14 Ọ bụ anyị wakporo ebe ndịda nke ndị Keretaịt+ nakwa ala ndị Juda nakwa ndịda Keleb;+ anyị gbakwara Ziklag ọkụ.” 15 Devid wee sị ya: “Ị̀ ga-eduga m n’ebe ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ahụ nọ?” O wee zaa, sị: “Jiri Chineke ṅụọrọ m iyi+ na ị gaghị egbu m, nakwa na ị gaghị enyefe m n’aka nna m ukwu,+ m ga-edugakwa gị n’ebe ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ahụ nọ.” 16 O wee duru ya gbadaa,+ ma, lee, ha gbasasịrị n’ala ahụ niile, na-eri ihe, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, na-erikwa oriri+ n’ihi ọtụtụ ihe niile ha kwatara n’ala ndị Filistia nakwa n’ala Juda.+ 17 Devid wee gbuwe ha malite n’isi ụtụtụ ruo n’anyasị, ka o wee bibie ha; ọ dịghịkwa nwoke ọ bụla n’ime ha gbapụrụ,+ ma e wezụga narị ụmụ okorobịa anọ ndị nọkwasịrị n’ịnyịnya kamel gbaa ọsọ. 18 Devid wee napụta ihe niile ndị Amalek buuru,+ Devid napụtakwara ndị nwunye ya abụọ. 19 Ọ dịghịkwa ihe ha ọ bụla fọdụrụnụ, malite n’ihe kasị nta ruo n’ihe kasị ukwuu, ruokwa n’ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom, malitekwa n’ihe nkwata ruo n’ihe ọ bụla ha weere.+ Devid natara ha ihe niile. 20 Devid wee kpụrụ ìgwè ewu na atụrụ na ìgwè ehi niile, bụ́ ndị ha chị na-aga n’ihu anụ ụlọ ndị ọzọ. Ha wee sị: “Ndị a bụ ihe Devid kwatara.”+ 21 E mesịa, Devid bịakwutere narị ndị ikom abụọ+ ahụ ike gwụrụ nke ukwuu nke na ha esoghị Devid gaa, bụ́ ndị ha mere ka ha nọdụ ala n’akụkụ iyi ndagwurugwu Bisọ; ha wee pụta izute Devid na ndị ya na ha so. Mgbe Devid bịakwutere ha, ọ malitere ịjụ ha otú ha mere. 22 Otú ọ dị, nwoke ọjọọ ọ bụla na-abaghị n’ihe+ n’ime ndị ikom ahụ ha na Devid so gaa zara ma na-asị: “Ebe ọ bụ na ha esoghị anyị gaa, anyị agaghị enye ha ihe ọ bụla si n’ihe nkwata anyị napụtara, ma e wezụga ịkpọnye onye nke ọ bụla nwunye ya na ụmụ ya ndị ikom, ka ha duru ha laa.” 23 Ma Devid sịrị: “Ụmụnne m, unu esila otú a mee ihe Jehova nyere anyị,+ n’ihi na o chebere+ anyị wee nyefee ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga nke wakporo anyị n’aka anyị.+ 24 Ònye ga-ege ntị n’ihe a unu na-ekwu? N’ihi na otú òkè nke onye gara agha hà, otú ahụ ka òkè nke onye nọdụrụ ọdụ n’akụkụ ibu+ ga-aha. Mmadụ niile ga-eketa ihe.”+ 25 O wee ruo na malite n’ụbọchị ahụ gaa n’ihu, o mere ka ọ bụụrụ Izrel ụkpụrụ na mkpebi ikpe+ ruo taa. 26 Mgbe Devid lọrutere Ziklag, o zigaara ndị okenye Juda, bụ́ ndị enyi ya,+ ụfọdụ n’ime ihe nkwata ahụ, sị: “Nke a bụ onyinye+ iji gọzie unu, bụ́ nke a kwatara n’aka ndị iro Jehova.” 27 O zigakwaara ndị nọ na Betel+ na ndị nọ na Remọt+ n’ebe ndịda na ndị nọ na Jatia,+ 28 zigakwara ndị nọ n’Aroa na ndị nọ na Sifmọt na ndị nọ n’Eshtemoa,+ 29 zigakwara ndị nọ na Rekal na ndị nọ n’obodo niile nke ndị Jeramiel+ na ndị nọ n’obodo niile nke ndị Kenaịt,+ 30 zigakwara ndị nọ na Họma+ na ndị nọ na Bọrashan+ na ndị nọ n’Etak, 31 zigakwara ndị nọ na Hibrọn+ nakwa n’ebe niile Devid jegharịworo, ya na ndị ikom ya.